Ny Resy ambony amin'ny Google miaraka amin'i Semalt
Feno fampahalalana ny Internet. Ny ankamaroantsika dia tototry ny taratasy, vaovao, hafatra tokony hotsaraintsika amin'ny fiainantsika andavan'andro. Tranonkala an'arivony no miara-miasa amin'ny sehatra nomerika, ary maro amin'izy ireo no azo antoka fa mpifaninana. Ka ahoana no hahafahantsika manao fahombiazana amin'ny toe-javatra ireo? Mazava ho azy, manana ny lalàny manokana ny fampiroboroboana amin'ny nomerika ary ireo izay mahatakatra azy ireo dia afaka mandresy amin'ity hazakazaka ity.
Tsy isalasalana, ny fampandehanana orinasa an-tserasera dia tsy mitovy amin'ny zavatra rehetra ataonao amin'ny tena fiainana mba hahazoana ny vola ary hahatratra ny fitomboan'ny orinasanao manokana. Ireo izay mianatra ny fitsipika dia mahita fahombiazana. Ka ny fampiasana optimization tranonkala dia manampy amin'ny fampisehoana ireo entanao na serivisinao. Nanjary hita ho an'ny mpanjifa mety hitranga ny orinasanao.
Mety ho manan-danja ho an'ny tompona orinasa, manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana amin'ny daholobe ary ny tompon'andraikitra amin'ny varotra hianatra momba ny fomba vaovao amin'ny fampiasana amim-pahombiazana ny tranonkala. Ny zavatra rehetra nataonao mba hahazoana vola dia azo hatsaraina mba hahazoana vokatra tsara kokoa.
Mahazo ny fanampiana matihanina ho an'ny ekipa Semalt, ny orinasanao dia mety ho tonga amin'ny valin'ny Google ambony ary hahatratra ny tombony azonao.
Misy azonao atao ve ny hahazoana valiny mampiroborobo ny orinasanao manokana amin'ny Internet?
Eto na eto dia mahita ny tantaran'ny lehilahy sy vehivavy tsara vintana izay nahazo vola mora foana tamin'ny World Wide Web. Mazava ho azy fa tena manome aingam-panahy. Fa ireo tantara ireo matetika dia vokatry ny vintana madio, fahaiza-mamorona na kisendrasendra. Saingy azonao antoka ve ny momba ny hevitrao vaovao momba ny fampiroboroboana handany vola be momba izany? Moa ve ianao hanana tanjaka ampy hianarana ny tenanao, mandany fotoana be nefa ny mpifaninana aminao mety hiara-miasa amin'ny matihanina hanatratrarana ny tanjony? Raha tsy fantatrao tsara izay tokony hatao, dia mila fotoana be hahalalanao ny fomba fiasanany. Raha tsy mahazo ny zava-drehetra ianao, dia mety ho foana ny vola fampiroboroboana.
Azonao atao ve ny hampitombo ny fifamoivoizana e-varotra raha tsy misy fanampiana fanampiny, ary hafiriana izany? Tsy isalasalana, tena ilaina ny manana fahalalana momba ny fampiroboroboana an-tserasera. Azonao atao ny mamaky fampahalalana maro, manatrika tranonkala amin'ny Internet, mandray anjara amina vondrona na olon-tokana. Isaky ny dingana, dia hahazo fampahalalana vaovao avy amin'ny loharano samihafa ianao, saingy rehefa avy eo, dia mety ho diso fanantenana ianao amin'ny valiny. Ny ezaka ataonao fotsiny dia tsy ampy ny handaminana tsara ny zava-drehetra. Amin'ity toe-javatra ity, hamoy ny fotoana fitomboana mandritra ny herinandro sy volana ny orinasanao. Ny olona rehetra dia tokony hieritreritra indroa momba ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ity tranga ity. Tokony hanaiky ny toe-karena ity phantom ity ve izy ireo, sa tokony handany vola amin'ny fidiram-bolany ho avy amin'ny fomba mahomby kokoa izy ireo?
Fitaovana an-tserasera an-tserasera ho an'ny orinasanao
Amin'izao fotoana izao dia nanjary malaza be ny fivarotana an-tserasera. Afaka mijanona ao an-trano ny olona ary mandany tsara ny fotoanany mandritra ny fivarotana virtoaly, hahazoana zavatra ara-nofo amin'ny tena fiainana. Azonao atao ny mividy entana sy serivisy amin'ny faritra rehetra amin'ny planeta, ary mety hitranga haingana kokoa izy io, toy ny tamin'ny taona teo aloha. Amin'ireny toe-javatra ireny dia zava-dehibe tokoa ny hahatonga ny serivisinao ho tonga lafatra, azo antoka, hanomezana saina ny olona rehetra, ary hanampy azy ireo hitarika safidy tsara kokoa. Ary aza adino ny serivisy aorian'ny varotra.
Ahoana no hataonao raha olona maro no namangy ny tranokalanao sy mila valiny momba ny fanontaniany? Tokony mbola hampifaly azy ireo amin'ny fivarotana an-tserasera ihany ianao. Tena ilaina ny manana mpanjifa mahazatra na mpanaraka ny marika aza. Izany no antony ilain'ny tompona orinasa mampiasa fitaovana SEO SEO miaraka amin'ny fanohanan'ireo matihanina mahay. Satria tsy nanana fotoana ampy ianao sy ny ekipanao hanome fanampiana sy fanohanana ny olona tsirairay, raha be loatra ny maro amin'izy ireo. Tsy te hiandry ny olona, noho izany dia tsy maintsy mijery mialoha ity raharaha ity ny mpandraharaha ary hiasa amin'izany miaraka amin'ny matihanina mialoha.
Mamorona paikady marketing mahomby ho an'ny karazana raharaham-barotra rehetra, mila ampidirinao ny tetibola ho an'ny fitaovana SEO mahery sy ilaina. Hiteraka vokatra maharitra mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny torohevitra sasany avy amin'ireo mpanoro hevitra antsika.
Ny karazana teti-bola samihafa dia misy ka izay rehetra afaka misafidy ny mety indrindra. Afaka manintona mpividy ianao izay mila ny vokatrao miaraka amin'ny fanampiany mampiasa tricks marketing sasany, mazava ho azy.
Ianao ve mora ny mivarotra? Tsara ny mividy entana any amin'ny magazay an-tserasera izay noforonina hendry. Mora ny mivarotra raha mamorona paikady mety hampiakatra anao izy. Mitadiava tombony, mangataka torohevitra, ary fanampiana amin'ny olona nahavita azy io imbetsaka. Hampitombo ny varotrao ianao ary hahazo orinasa maharitra amin'ny mpanjifa, izay hanoro ny serivisinao. Mijanona ho mifandray hatrany, asehoy ny tombotsoanao ary ataovy mahaliana ny mpanjifa mety ho eo.
Serivisy tranonkala Semalt
Noho ny fanampian'ny fitaovana an-tserasera dia hiakatra ny vola miditra. Mety hitranga izany satria ny tranokalanao dia afaka hanatevenana olona be dia be, fa mpanjifa avy amin'ny faritra iray. Miaraka amin'ny paikady novolavolan'ny manam-pahaizana manokana momba ny masoivoho iraisam-pirenena dia azonao atao ny manakatra faritra, firenena sy faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao. Koa i Semalt dia tsy manolotra fitaovana SEO ihany fa mamolavola paikady hanampy ny asa aman-draharahanao manerantany ary ho lasa malaza. Azontsika atao ny manatsara ny fahaizan'ny milina fikarohana. Ny maso-masoay dia manome fanampiana matihanina amin'ny fisafidianana ireo teny fanalahidy mifanaraka amin'ny asan'ny orinasanao.
Hamela anao hahazo vaovao mifanentana momba ny mpifaninana, angona tsy miovaova momba ny fizarana tsenanao na ny indostria ianao. Azo atao ny manamarina metrikety ao amin'ny media sosialy, manatsara ny ezaka ataonao sy ny fanatrehanao araka izany.
Ho lasa manan-danja tokoa ny SEO amin'ity taonjato ity. Ny fampiasam-bola misy vidiny miaraka amin'ny fiaraha-miasa isan'andro, ny orinasa mpandraharaha dia hahazo orinasa tsy mitsaha-mitombo. Hahazo fifamoivoizana voajanahary ny masera amin'ny marika fikarohana. Ny hadisoana teo aloha teo dia nesorina tsirairay. Mazava ho azy fa tsy misy olona tonga lafatra, ny tsy fahombiazana kely mety hitranga, fa ny paikady ara-barotra matanjaka dia hitarika ny orinasa hahomby.
Ny fampandrosoana ny varotra nomerika sy Internet no antony nisehoan'ny Semalt. Tamin'ny volana septambra 2013 no nisy olona nanangana olona talenta vitsivitsy izay nanapa-kevitra ny ho tonga ekipa. Ary izy ireo no mpanorina ny Semalt izay namorona fahagagana. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia nanabe mpiasa sy nahay ary mpanjifa mahafa-po manerana izao tontolo izao, manampy ny olona hanatanteraka ny nofinofiny.
Inona no ilazanao manamarina ny orinasanao ankehitriny? Tsy mila mitsidika gitara ianao na miandry andiany iray. Ny hany ataonao dia ny hifandraisantsika amin'ireo manampahaizana momba ny masoivoho nomerika ary mandray fepetra vitsivitsy hampitomboana ny orinasanao. Mety ho ilaina io na aiza na aiza misy anao sy ny maha-firenena anao. Raha te ho be loatra amin'ny antso an-tariby sy mailaka avy amin'ny mpanjifa ianao, ampio ny varotrao, ary mahazo tombony amin'ny asanao ianao, tohizo fotsiny ny famakiana.
Matahotra ve ianao sao tsy mahazo ireo fitaovana SEO SEO? Avy amin'ny firenena maro samihafa ny mpanjifanay, noho izany dia hiteny aminao ny fiteny nofidinao ny mpiasanay. Avia aty hizaha ny lisitry ny fiteny. Ny mpanjifanay dia mandefa teny fankasitrahana noho ny fanampiana azy ireo hivoatra sy hiroborobo:
SERVICE ROYAL (Apple Service Center). Mampiasa Semalt FullSEO, ity orinasa (miorina any Ukraine) ity dia nampitombo ny fifamoivoizana voajanahary 300% latsaky ny herintaona!
Zaodrasle.si. Ny folo volana niarahany niasa tao amin'ny Semalt dia namela ity fivarotana firaisana ara-nofo ivelan'i Slovenia ity hampitombo ny fifamoivoizana organik amin'ny tranokalany amin'ny 520%. Nitombo ny isan'ny fitsidihana tamin'ny taona 1216. Vokatr'izany, Zaodrasle.si dia lasa orinasa mandroso amin'i Slovenia ankehitriny.
Vavahady ho an'ny fikarohana sy hividianana francais. Full package ny fonosana feno FullSEO dia nampitombo ny isan'ny tenimiafin'ny Google TOP-10 ho 5782, ka lasa 303% ny fifamoivoizana mony simika ao anatin'ny 9 volana monja. Ankehitriny, ity orinasa ity dia iray amin'ny anarana malaza ao amin'ny orinasa francaise any Angletera.
Mampiasa Internet ve ianao? Avy eo ianao mifatotra hahafantatra hoe inona ny motera fikarohana. Nampiasa iray na maromaro tamin'izy ireo ianao. Amin'ireo karazany dia Google no lehibe indrindra. Ahoana ny fomba fiasa eo? Mampiditra teny fikarohana na teny ianao, tsindrio 'fikarohana', ary ny milina fikarohana dia mamerina anao ny lisitry ny tranonkala hita. Maninona ireo sasany ao amin'ny laharana ambony indrindra ny vokatra, raha ny hafa kosa midina amin'ny lisitra? Ny antontan'isa dia milaza amintsika, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy mijery afa-tsy ny toerana ambony. Raha te ho any ianao dia mila miditra amin'ny TOP-10. Mba haseho eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana dia mila manao dingana ianao, izay hanatsarana ny toerana misy anao ao anatin'ny lisitry ny fangatahana.
Fitaovana SEO izahay
Ireo injeniera Semalt dia manam-pahaizana amin'ny fampisehoana ny tranokalanao eo amin'ny toerana voalohany ao amin'ny Google TOP 10. Rehefa any ianao, ny varotrao sy ny varotra an-tserasera dia hiroborobo. Tsy mandainga ny antontan'isa - mitombo isan'andro ny tafiky ny mpampiasa Internet. Amin'izao fotoana izao, mihoatra ny ampahatelon'ny mponina manerantany no ao amin'ny Internet. Mila mahasarika an'io mpihaino io ianao, satria manana orinasa ianao, ary misy vola handaniany. Mpampiasa an'arivony sy an'arivony no mitady ny entana mitovy amin'ny anao ao amin'ny tranokalan'ny mpifaninana aminao. Ny mpifaninana mpamily anao dia mikendry ny haka toerana tsara indrindra amin'ny valin'ny fikarohana. Fa maninona ianao? Mendrika ny ho any ianao - koa omeo aina ny tranonkalanao miaraka amin'ny milina fikarohana.
Tia video ny olona! Azontsika atao ny mampiseho ny ataonao amin'ny horonantsary fampiroboroboana mangatsiatsiaka. Izy io dia hitondra ho anao mpanjifa vaovao ary hampitombo ny fiovanao!
Fampahalalana momba ny tranokala
Amin'izao tontolo izao haingana, ny iray amin'ireo zavatra sarobidy indrindra dia ny fampahalalana. Raha azonao amin'ny fotoana ara-potoana izany, azonao atao ny manitsy ny dinganao bebe kokoa ary ialao ireo fahadisoana maharary. Iray amin'ireo fomba iray hifehezana ny fandrosoanao ny fandrosoanao dia ny fandinihana ny angon-drakitra famotopotorana ary ny vinavinan'ny fandrosoana ho avy. Makà fampahalalana misy amin'ny Internet miaraka amin'ireo manam-pahaizana momba ny tanjona.
Eritrereto fotsiny, olona manodidina ny telo arivo tapitrisa eo ho eo no mety ho mpanjifanao ho avy. Ka maninona izy ireo no tsy mandeha miantsena an-tserasera? Mampalahelo izany, saingy ny mpanjifa mety ho tratran'ny mpivarotra an-tapitrisany no mifaninana aminao amin'ny fisamborana mpividy sy ny volany. Ireo mpifaninana ireo dia tsy mamela anao hiditra any amin'ny Google Top fotsiny. Mba ho mpandresy amin'ity marathon maharitra mandrakizay ity dia tsy maintsy misafidy ny ekipa matihanina indrindra ianao miara-miasa.
Miaraka amin'i Semalt, mahita fomba vaovao hanatsarana ny marketing ianao. Azontsika atao ny mandamina serivisy miray tanteraka izay mety misy: fampandrosoana ny fivarotana an-tserasera, famerenam-bola ary koa ny fampiroboroboana sy fanohanana teknika tena tsara. Mifandraisa amin'ireo mpanolo-tsaina anay ary tanteraho ny valiny tena sahy amin'ireo matihanina ao amin'ny Semalt!
Nahoana ny olona no mifidy antsika?
Mandritra ny fiaraha-miasa amin'ny masoivoho iraisam-pirenena dia hanampy anao ny 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro. Ho fantatr'izy ireo ny antsipiriany kely indrindra amin'ny orinasanao amin'ny Internet.
Efa nahavita niasa tamin'ny 800 000 000 mahery izahay ary nahavita azy ireo. Niara-niasa tamin'ny mpanjifa mihoatra ny 300 000 izahay. Azonao atao ny manamarina ireo tetikasa rehetra ao amin'ny tranokalanay.
Ny vidiny mirary ho an'ny valiny tsara
Ny mpanjifanay dia mankasitraka ny kalitaon'ny asantsika mifandraika amin'ny tahan'ny tahan'ny mora sy ny tolotra manintona.
Voalohany indrindra dia ny tompon'andraikitra manokana no tompon'andraikitra amin'ny dingana rehetra omenay. Hiangona vaovao feno momba ny mpifaninana hatrizay izahay. Ny fizotry ny tranokala dia hodinihina. Mba hisarihana ny mpihaino kinendry, ny ekipanay SEO dia maka ny teny fanalahidy mety indrindra miaraka amina pejy fampiroboroboana ho an'ireo andian-teny mifandraika amin'izany. Ny tranokalanao dia hojerena amin'ny sivana Google. Hamolavola paikady ny manam-pahaizana momba ny hetsika hafa
Vitsy ny toro-hevitra hanatsarana ny loharanon-tserasera
Manoro hevitra mafy izahay amin'ny fampiasana ireo torohevitra ireo. Hanampy ny orinasanao amin'ny fifaninanana bebe kokoa izany. Ny fisoratanao dia hialana amin'ny fameperana, ary ny fampiroboroboana dia tsy maintsy ho lasa mahomby kokoa.
Hamarino sy hanitsiana ny kaody HTML mba hahalavorary azy;
Hamorona marika sy toetra mifanaraka amin'ny milina fikarohana fikarohana mahazatra;
Manamboara meta tag amin'ny fampiasana teny fanalahidy.
Manome rohy mora tapaka izahay. Ary koa, manangana rohy betsaka araka izay azo atao amin'ny loharanom-panandratana. Tena zava-dehibe tokoa ny fanitsiana ny robots.txt sy .htaccess rakitra. Ity hetsika ity dia hanome fiantraikany tsara amin'ny fahitana ny tranokalanao eo amin'ny laharan'ny search engine.
Angamba tsy dia be loatra ny teny sy ny teny tsy fantatra? Tsy tianay ho very hevitra be ianao. Saingy tsy mora izany fa lasa malaza amin'ny World Wide Web. Mila fahalalana manokana sy ny fahombiazan'ny tetikasa teo aloha. Miaraka amin'ny ekipanay manam-pahaizana mahay sady mahay no ho azonao ny fampielezan-kevitra SEO mahery. Ho hita maso ny tranonkalanao ho an'ireo mpanjifa sy olona liana amin'ny serivisinao na ny entana amin'ny fanampiana ataontsika.
Tsy misy any amin'ny toerana misy anao na izay fiteny ampiasainao. Afaka manana karazana orona ianao, ary hahita vahaolana ho anao. Fivarotana mofo iray eo an-toerana na fizarana fiara, mety hahomby ny orinasa rehetra. Miezaha hanatsara ny orinasanao amin'ny Agence digital ary hahatratra ny vokatra tsara indrindra!